Imisa Dal ayaa ka dhex jirta Soomaaliya…?
Cabdullahi Ibrahim - Waxaan waayadan ku wareeray waxa ay Soomaaliya tahay, Ma hal dalbaa mise Dalal badan oo mid isku ah? Imisaa Dal ayaa ka dhex jirta Wadanka Soomaaliya?
Wiil Halyey Ah Haddii Aad Rabtid Ha Tumin Hooyadii…! - Dhibaateynta Dumarka
Mohamed Haji - Xadgudubyada ka dhanka ah Dumarka ayaa ah kuwo kala duwan qaab ahaan iyo qab ahaan. Hayeeshee gebi ahaanba xadgudubyaasi waxa ay ka simanyihiin gumaadka Ruuxa Dumarka ah.